Global Voices teny Malagasy · 7 Mey 2018
07 Mey 2018
Tantara tamin'ny 07 Mey 2018
Amerika Latina07 Mey 2018
Filipina: novonjen'ny feso sy ny trozona ilay mpanarato
Filipina07 Mey 2018
Nilaza ilay mpanjono Filipiana Ronnie Dabal fa novonjen'ny feso sy ny trozona izy rehefa nivadika tany an-dranomasina ny sambony tany Palawan, Filipina.
Afrika Atsimo: Te hanoroka sy hanatsara tarehy i Julius Malema!
Afrika Mainty07 Mey 2018
Tsy mahagaga amin'ny fifanoherana intsony i Julius Malema, filohan'ny Ligin'ny Tanora ANC (ANCYL). Raha ny marina, maro no hilaza fa izany no tena iezahany mafy. Heverin'ny sasany ho feon'ny tanora mahantra ao Afrika Atsimo izy.
Angola Sarin'ny Karnavaly 2006
(Marihina fa tamin'ny 5 May 2006 no nivoaka ny lahatsoratra teny Anglisy) Sary avy ao amin'ny “Tonspi” – José Silva Pinto
Azia Atsimo07 Mey 2018
Miasa amin'ny banky ho fivelomany ny Bangladeshita mpiasa iray ary manoratra ao amin'ny sehatra fibilaogina amin'ny teny Bangla Bandh Bhanger Awaaj amin'ny anarana Megh (rahona). Taorian'ny fivoriana fanao isam-bolana tsy misy dikany tao amin'ny banky iasany, naneho ny hatezerany tamin'ny lahatsoratra bilaogy izy vao haingana.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana07 Mey 2018
"Tian'ny olona izay mitantana ny governemanta ny handefa hafatra iray ho an'ireo mpikatsaka fanavaozana. ..izay tsy atahoran-dry zareo (governemanta) ny mety ho fampielezankevitra atao hamelezana an-dry zareo...Mila zavatra miova ny vahoaka"